Xaaska madaxweynaha Hirshabeele oo ka mid ahayd xubnihii maanta ku guuleystay doorashada Aqalka hoose – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Xaaska madaxweynaha Hirshabeele oo ka mid ahayd xubnihii maanta ku guuleystay doorashada Aqalka hoose
Wararka aynu ka heleyno magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Sh/dhexe ayaa waxay sheegayaan in maanta halkaasi lagu doortay ilaa 3 qof oo ka mid noqon doono xildhibaanada Hirshabeele u matalaya Aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya.
Seddaxdaas xildhibaan ee maanta la doortay ayaa waxaa ku jirta xaaska madaxweynaha maamulka Hirshabeele Maryan Axmed Haaruun, kadib markii ay heshay cod gaaraya 38 cod.
Maryan Axmed Haaruun ayaa la sheegay inay la tartameeysay musharaxada kale oo lagu magacaabo Zamzam Ibraahim Xuseen oo iyadane heshay 18 cod.
Labadaasi musharax ayaa ku tartamaayay kursiga beesha Gaaljecel, waxaana guusha Maryan si weyn uga soo shaqeeyay Odaygeeda oo ah madaxweynaha maamulka Hirshabeele Cali C/laahi Cosoble.
Madaxweyne Cosoble ayaa la sheegayaa inuu Ugaaska beesha Gaaljecel iyo guddiga doorashooyinka Hirshabeele cadaadis ku saaray in kursigaan ay haween ku tartamaan, isagoona taasi ka damacsanaa in xaaskiisa la tartanto haweeney kale islamarkaana ay kaga guuleysato kurigaas.
Waxay tani caddeyn u tahay heerka faragelinta baahsan ay madaxda maamul goboleedyada dalka ugu haayaan arrimaha doorashooyinka dalka, iyadoona sida la ogsoon-yahay madaxweynaha Hirshabeele Cali C/laahi Cosoble uu hore isku dayay inuu xaaskiisa ku darro Aqalka sare ee baarlamaanka, balse uu arrinkaasi ku fashilmay.
Dhinaca kale, kursiga labaad ee maanta lagu doortay magaalada Jowhar ayaa waxaa ku tartamaayay musharixiin kasoo jeeda beesha Ujeejeen, waxaana kursigaasi ugu dambeyn ku guuleystay Maxamuud C/laahi Axmed oo helay 38 cod, halka musharaxa kale oo ahaa Cali Xasan Cismaan uu isna helay 9 cod.
Ugu dambeyntii, kursiga seddaxaad ayaa waxaa ku tartamaayay musharixiin kasoo jeeda beesha Xawaadle/Cabdi Yuusuf, waxaana ugu dambeyn kursigaasi ku guuleystay C/risaaq Axmed Maxamed (C/risaaq Dheere) oo helay 28 cod, halka musharaxa kale oo ahaa Cali Nuur Xuseen (Boodaaye) uu isna helay 23 cod.